Ny torolàlana feno momba ny tsipika marijuana - fototra iorenanana
Ny torolàlana feno ho an'ny tsipika marijuana
Provided by: Fitsarana Kaitlin
Taorian'ny fananganana ara-dalàna ny rongony tany Etazonia tamin'ny taona 2018 dia vokatra maro mifandraika amin'ny rongony no nanenika ny tsena. Vao tsy ela akory izay, miaraka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana bebe kokoa, karazana marijuana isan-karazany no hita eny an-tsena natao ho an'ny tanjona samihafa.
Ny tady dia fantatra amin'ny karazan-javamaniry marijuana misy toetra izay tsy voatery tafiditra ao anatin'ny iray amin'ireo karazana telo mahazatra. Mba hividianana ny vokatra tonga lafatra dia tsy maintsy fantarina aloha ny karazana rongony misy sy izay ataony.
Inona ny famaritana ny Marijuana Strains?
Rehefa maheno ny teny marijuana ianao dia ireo karazana tonga ao an-tsainao dia Indica, Sativa, ary hybrid. Ireo karazana telo ireo angamba no karazana rongony mahazatra indrindra izay fantatry ny rehetra.
Ireo telo ireo dia samy hafa ny vokany amin'ny mpampiasa ary manampy amin'ny olana isan-karazany. Na dia miala sasatra kokoa aza i Indica ary miteraka vokatra mampitony ny mpampiasa, i Sativa kosa no mifanohitra amin'izay ary manome hery ny mpampiasa. Ny Hybrid amin'ny ankapobeny dia samy manana ny fananany Indica sy Sativa, araka izay asehon'ny anarany.
Na izany aza, ankoatr'ireo sokajy telo malalaka ireo dia tsy tafiditra ao anatin'izany ireo karazana rongony isan-karazany. Betsaka ny santionany tsy mahafeno ny toetra rehetra amin'ireo sokajy telo lehibe. Ireo dia antsoina hoe karazana marijuana izay tsy mifanaraka amin'ny fizarana iray manokana ary mety manana fananana samihafa.
Zavatra iray hafa manamarika fa samy manana ny habetsahan'ny CBD sy THC, singa roa hita ao amin'ny rongony. THC dia fitaovana manova ny saina izay mitarika amin'ny vokany 'avo' amin'ny mpampiasa. Ny CBD dia tsy misy fiatraikany amin'ny mpampiasa fa manana ny kalitaon'ny fanafody rehetra. Na eo aza izany dia ny marijuana no iray amin'ireo fanafody be mpampiasa indrindra any Etazonia.
Fa maninona ary ahoana no ampiasana azy ireo?
Araka ny voalaza etsy ambony, ireo karazana tadin-dokanga ireo dia samy manana ny tanjony avokoa. Ny sasany amin'ireo fampiasana mahazatra indrindra dia ny fampihenana ny fanaintainana, ny fanalefahana ny fanahiana, ny fifehezana ny torimaso, sns. Mahaliana fa ny mpahay siansa sasany aza dia nahita ny mety fampiasana marijuana amin'ny fitsaboana homamiadana.
An lahatsoratra momba ny lamina fampiasana rongony rongony nanasongadina fa ny fampiasana matetika ny vokatra rongony dia ny manampy amin'ny fanaintainana maharitra. Ny THC sy ny CBD, misy amin'ny marijuana, dia nanampy tamin'ny fanalefahana ny fanaintainana, nahatonga ny vokatra rongony ho soloina ny aretin'andoha sy ny migraine nentim-paharazana.
Ny fampiasana marijuana voalohany dia nahagaga fa tsy ny hippies tamin'ny taonjato faha-20, fa ny olona sinoa lavitra tany aloha. Marijuana dia nahatanteraka tanjona samihafa avy eo, indraindray na dia fanafody aza, ary ny fampiasana azy dia nivoatra nanomboka teo. Afaka mahita vokatra rongony amin'ny endrika maro eny an-tsena ianao. Vokatra manomboka amin'ny voninkazo rongony, misy tonon-taolana, penina vape, menaka, siligaoma, menaka manitra sns. Ny safidy dia miankina betsaka amin'ny fampiasana ny vokatra, ary misy zavatra ho an'ny rehetra.
Inona avy ireo karazana marijuana?
Misy karazana karazana marijuana ireo, ary hisy fikarohana sy fampandrosoana bebe kokoa miaraka amin'ny fotoana. Na izany aza, ny karazana sasany dia malaza amin'ny fampiasany manokana. Ireto ny sasany amin'izy ireo:
Charlotte's Web- Iray amin'ireo karazana rongony malaza indrindra, ny tranonkalan'i Charlotte dia fitambarana fanafody avo lenta ao amin'ny CBD ary THC ambany avy amin'ny fianakaviana marijuana. Izy io dia misy latsaky ny 0.3% an'ny THC, ka izany no tsy ahatsaran'ny mpampiasa 'avo' aorian'ny fihinanana ny vokatra. Izy io dia iray amin'ireo aretina voalohany izay nanampy tamin'ny toe-pahasalamana sy nampiseho valiny hita maso.
Ny marary epileptika Charlotte Figi, izay niaina fanintona epileptika mafy, no notondroin'ilay aretina. Rehefa nahazo ny diloilo rongony ny reniny dia nihatsara be ny fahasalamany. Ity tantara ity dia nanintona ny sain'ny vahoaka sy ny governemanta tamin'ny fitazomana rongony rongony. Betsaka ny olona no mihevitra fa ny Web's Charlotte dia mpandray anjara lehibe amin'ny ara-dalàna ny rongony any Etazonia.
Acapulco Gold- Izy io dia iray amin'ireo karazana marijuana mampatanjaka indrindra. Acapulco Gold dia mety amin'ny tanjona fanafody sy mahazatra. Nasehony fa mety amin'ny fitsaboana ny fanaintainana, ny fanahiana sns ... Misy vokany mahery eo amin'ny mpampiasa izany, manatsara ny toe-panahin'izy ireo ary mitaona euforia.
Avy amin'ny faritra Acapulco any Mexico izy io ary nahasarika mpampiasa efa ela. Ny loko tsy manam-paharoa amin'ilay zavamaniry dia mampiavaka azy amin'ny hafa, ary mitovy amin'ny lokony toy ny tavo dia manana fofona toy ny tavo izy.
Blue Dream- Tsy toy ny Acapulco Gold, Blue Dream dia karazana rongony / marijuana mampiadana sy mampitony. Na izany aza, io koa dia manana fananana manala fanaintainana ary mampihena ny fanahiana amin'ny mpampiasa.
Ny fampiharana mahazatra azy dia ny fanatratrarana toe-tsaina sy vatana milamina. Tsy fantatra mazava ny niandohany, saingy mijanona ho iray amin'ireo mpifaninana ambony indrindra amin'ny karazan-drongony rongony izany.
White Widow- Na dia tsy dia be mpahalala toy ireo karazany etsy ambony aza, ny White mpitondratena dia karazana marijuana manala aretina. Ny niandohan'ny White Widow dia avy amin'ny karazana rongony roa avy any Brezila sy India atsimo, novolavolaina tao Amsterdam.
Izy io dia manana atiny THC avo, mitarika 'avo' maharitra amin'ny mpampiasa. Izy io koa dia manampy amin'ny fanalefahana ny fanaintainana sy ireo olana mifandraika amin'izany.
Northern Lights- Ny mari-pana rongony / marijuana malaza mahazatra ary be mpahalala, ny Jiro Avaratra no fatra mifehy ny torimaso lavorary miaraka amin'ny tombony hafa. Namboarina tamin'ny faran'ny taona 1900 izy io ary nanomboka teo dia nanampy ireo mpampiasa isan-karazany hifehy ny fihodinan'ny torimaso ary hiady amin'ny tsy fahitan-tory.
Ny fihenjanana dia misy fiatraikany mampiadana amin'ny mpampiasa, izay mametraka azy ireo amin'ny toe-tsaina milamina ary mahatonga azy ireo hatory. Ny olona mijaly noho ny tsy fahitan-tory na tsy fatoriana dia matetika mampiasa an'io mba hitaomana ny torimaso sy hanampiana azy ireo hiala sasatra. Izy io dia iray amin'ireo karazana Indica malaza indrindra eny an-tsena.
Fa maninona no vokatra tsara ho anao ny vokatra rongony?
Tsy maintsy manontany tena ny iray hoe maninona izy ireo no mila misafidy vokatra rongony noho ny fanafody efa amboarina ho an'ny fampiasana mitovy amin'izany. Ny valiny dia ny vokatra marijuana dia nateraka voajanahary ary tsy voahodina noho ny fanafody mahazatra.
The Ny WHO dia efa nanoratra momba ny mombamomba ny fiarovana azo antoka an'ny CBD, ary fikarohana be dia be no manaporofo fa ny vokatra rongony dia afaka manolo amin'ny fomba mahomby ny fanafody fanaintainana sy fanafody hafa manimba eny an-tsena.
Miaraka amin'ny fivoarana marobe mifandraika amin'ny marijuana sy vokatra marobe an'arivony eo an-tsena dia ilaina ny mahafantatra hoe inona ny karazana aretina sy ny fomba fiasan'izy ireo. Miaraka amin'ny fanampian'ny fikarohana sasany dia azonao atao ny mahafantatra hoe inona avy ireo karazana mety indrindra mifanaraka amin'ny tanjonao ary hanampy.
Satria ireo toetra ireo dia samy manana ny mampiavaka azy, dia azonao atao ny mamantatra ny mari-pana rongony izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao ho an'ny traikefa mety.